जनताका पुर्नरसंरचना निमार्ण गदै आर. आर.एन - CDP Homepage
जनताका पुर्नरसंरचना निमार्ण गदै आर. आर.एन
साउन २५, कालिकोट
कालिकोट जिल्लाका बिभिन्न गाबिसमा पुर्नर निमार्णको काम नेपाल ग्रामिण पुर्नर निमार्ण संस्था आर आर एनले गरिरहेको छ । जिल्लाका १० गाबिसमा काम गरिरहेको गैरसरकारी सस्था आर आरएनले बिद्यालय भवन, खानेपानी योजना, सिचाई कुला र पोखरी निमार्णमा लगानी गरिरहेको छ ।
समुदायको उद्धारका लागी बिभिन्न कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य लिएको आर आरएनले कालिकोट जिल्लामा मात्र यो वर्ष एक करोड ६५ लाख बिभिन्न भँौतिक पुर्वाधार निमार्णमा खर्च गर्ने लक्षय लिएको आर आर एन कालिकोटका संयोजक लिलाराम न्यौपानेले वताए । गरिवीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरुको उद्धारका लागी नेपाल सरकारसंगको सहकार्यमा काम गरिरहेको संयोजक न्यौपानेको भनाई छ ।
जिल्लाको राँचुलि गाबिस वडा नं ३ देवारतोलीमा पुरै दलितहरुको वस्ती छ । आरआरएनले १६ लाख खर्च गरेर त्यहाँ रहेको जनसेवा प्राथमिक बिद्यालयको तीन कोठे भवन निमार्ण गरिरहेको छ । दलित वस्तीमा स्थापना भएको बिद्यालयमा बिद्यार्थीलाई वस्न भवनको अभाव भएको समुदायवाट गुनासो आएपछि सो बिद्यालयमा भवन निमार्ण गरिदिने भन्दै १६ लखा पैसा बिनियोजन गरेर भवन निमार्ण गरिएको हो ।
आर आरएनले छाप्रे गाबिसको वडा नं ३ मा रहेका महावै प्राथमिक बिद्यालयको पनि दुई कोठे भवन निमार्ण गरिरहेको छ । सो भवन निमार्णको लागत १५ लाख रहेको कार्यालयले जनाइको छ । नागरिकहरुको आवस्यक्ताका आधारमा सर्भे डिजाईन गरेर आफुहरुले काम गरिरहेको कार्यालयको भनाई छ । गैरसरकारी सस्था आर आरएनले ठेगेल्ली देबि निम्न माध्यमिक बिद्यालय कृतिर्पुर मुम्राको तीन कोठे भवन निमार्ण २० लाख लगानी गरेको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम मान्म वाट १७ कोष टाडा रहेको कृतिपुरमा भवन वनेपछि वालवालिकालाई सहज हुने बिद्यालयका प्रअ गोमा सिम्खाडाको भनाई छ । मेहेलमुडि गाबिसको वडा नं ६ मा रहेको खापरमष्ठा प्राबि साँखेज्युलामा पनि १७ लाखको लगानीमा तीन कोठे भवन वनिरहेको छ । यस्तै लालु गाबिसको ठाटीकोट ९ को सिमानेमुला खानेपानी योजना निमार्णका लागी ६ लाख खर्च गरिरहेको छ भने, रुप्सामा रहेको वान्नाछहरा सिचाई कुलो निमार्ण गर्न २२ लाख लगानी गरिरहेको छ ।
जिल्लाको माल्कोट गाबिसमा पहिरो नियन्त्रण गर्नका लागी ६ लाख प्रदान गरिएको छ भने जुविथा गाबिसको वडा नं ९ चुचेढुग्गामा पोखरी निमार्णका लागी ११ लाख खर्च भईरहेको वताईएको छ । सबै ठाउमा भौतिक पुर्वाधार निमार्णमा आरआरएनले पैसा खर्च गरिरहेको छ । यस सस्थाले अर्को वर्ष यिनै गाबिसमा थप १८ वटा अन्य योजना लागु गर्ने लक्षय राखेको जिल्ला संयोजक न्यौपानेले वताएका छन ।
अर्को वर्ष ३ करोड जति खर्च गरेर बिभिन्न संरचनाहरु निमार्ण गरिने उनको भनाई छ । आर आरएनले यो वर्ष १० गाबिसमा १ करोड ६५ लाख खर्च गरेको छ । यो वजेट अर्को वर्ष वढेर तीन करोडमा पुग्ने लक्षय लिएको छ । सरकारी निकायवाट हुने बिकास भन्दा कालिकोटमा गैरसरकारी निकायवाट हुने काम पार्दर्शि हुने गरेको निमार्ण गरिएका संरचनाले देखाएका छन । गत वर्षको् संवेक्षणमा सरकारी निकाय भन्दा गैरसरकारी निकायको काम प्रभावकारी भएको देखाईएको थियो । त्यसको कारण राम्रो संग अनुगमन हुनु र कर्मचारी निमार्णाधिन स्थानमा वस्नु हो भने, सरकारी निकायमा अनुगमनको अभाव र कर्मचारीहरुको लाप्रर्वाही देखाईएको थियो ।
Source: www.rajdhani.com.np (२०१६-०८-०९)
© 2017 CDP Homepage